Public Health in Myanmar: Infertility ကလေးမရနိုင်ခြင်း
သုတ်ရေကို ပါးစပ်ကမျိုချမိရင် ကိုယ်ဝင်ရနိုင်ပါသလား
မရနိုင်ပါ။ သုတ်ရေထဲက သုတ်ပိုးသည် အစာလမ်းကြောင်း (ပါးစပ်၊ အစာမြိုပြွန်၊ အစာအိမ်) ထဲ ရောက်သွားပါက ကြာကြာ မရှင်နိုင်ပါ။ လူကိုတော့ ဘာမှ မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရရန် သန်စွမ်းသည့် ကျားသုတ်ပိုးသည် ကျန်းမာနေသော မ-မျိုးဥ နှင့် မ-မျိုးပွားလမ်းကြောင်း (သားအိမ်ပြွန်၊ သားအိမ်) တနေရာရာမှာ တွေ့ရှိ-ပေါင်းစပ် ရပါမည်။ ထို့နောက် သားအိမ်၏ အတွင်းနံရံမှာ လာ၍ တွယ်ကပ်ရပါမည်။ မွေးလမ်းကြောင်း မဟုတ်သော အခြား (အစာလမ်း၊ ဆီးလမ်း စသည်) တို့မှာ မ-မျိုးဥဖြစ်စေ ကျား-သုတ်ပိုးဖြစ်စေ မရှင်နိုင်ပါ။
ကျွန်မတို့ ဇနီးမောင်နှံက ခွဲနေရတာများပါတယ်။ OG တွေနဲ့ပြကြည့်တော့လည်း ကလေးမရနီုင်တဲ့အကြောင်း မတွေ့ပါဘူးဆရာ။ အသက်ကလည်း ၃၅ ကျော်နေပြီမို့ သားသမီး အလွန်ရချင်ပါတယ်။ ရာသီစက်ဝိုင်းအလည် လောက်ရောက်ချိန်တွေမှာ အတူနေရင် သားသမီးရနိုင် တယ်လို့ ဆိုကြတာ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။ ဘယ်လိုတွက်ချက် ပြီးနေရင် ရနိူင်ပါသလဲ။ သမီးမျိုးဥ ကြွေဆေးလည်း တစ်ခါနှစ်ခါစားဖူးပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် အရပါ။ မထူးခြားခဲ့ပါဘူး။
စိတ်သောက အကြီးအကျယ် ရောက်နေရလို့ အကြံကောင်းရှိရင် ညွှန်ကြားပေးပါရှင်။ သားသမီး ရနိူင်တဲ့ ရက်များမှာ သမီးတို့ အတူနေနိူင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ချင်လို့ပါဆရာ။
စိတ်အားမပျက်ဘို့တော့ အားပေးပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတော့ ရေးပါရစေ။ လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါ။ ကြိုးစားပါ။
“ရာသီစက်ဝိုင်းအလည် လောက်ရောက်ချိန်တွေမှာ အတူနေရင် သားသမီးရနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြတာ” မှန်ပါတယ်။ လစဉ် ရာသီလာတာ တခါနဲ့တခါ စုစုပေါင်း ၂၈ ရက်၊ ၃ဝ ရက်၊ စသဖြင့် ကွာခြားပါတယ်။ အဲဒါကို တလလို့ယူပါ။ အလယ်ရက်ဟာ မ-မျိုးဥထွက်တဲ့ရက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုပါစို့ ၂၈ ရက်သမားအတွက် အရင်လ ရာသီစဆင်းတဲ့နေ့ရဲ့နောက် ၁၄ ရက်ဖြစ်မယ်။ ၃ဝ ရက်သမားအတွက်က နောက် ၁၅ ရက်မှာဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာက တခါဆင်းတာနဲ့ နောက်ဆင်းတာ ၂ ခုရဲ့ အလယ် တည့်တည့်ရက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရက်တွက်ရင် ရာသီ စဆင်းတဲ့ရက်ကို ၁ လို့ မှတ်ပါ။ စဆင်းရက်ဆိုတာက မမှားနိုင်ဘူး။ ပြီးသွားတဲ့ရက် ဆိုတာက မသေခြာဘူး မဟုတ်လား။
အဲဒီနေ့မှာ မ-မျိုးဥထွက်တယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးရဲ့ကိုယ်အပူချိန်ဟာ နဲနဲလေး တက်လာပါတယ်။ ကရိကထ ခံနိုင်ရင် တလလုံး မနက် အိပ်ရာထမှာ Body temperature ကိုယ်အပူချိန် တိုင်းပြီး မှတ်ရတယ်။ မ-မျိုးဥ ထွက်တဲ့နေ့မှာ နဲနဲတက်လာတာကို သိရမယ်။
အလယ်တည့်တည့်ရက် ၁ ရက်ထဲသာ မဟုတ်ပါ။ မတိုင်ခင် ၂-၃ ရက်၊ နောက် ၂-၃ ရက်တွေကလည်း ကိုယဝန်ရှိ်နိုင်တဲ့ ရက်တွေချည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်တားနည်းတွေ တခုမှ မလုပ်ပါနဲ့။ အတူနေပြီးပြီးချင်း၊ ရေမဆေးပါနဲ့။ ဇနီးက ပက်လက်အနေအထားကိုသာ ၅-၁ဝ မိနစ် နေပါ။ လိုအပ်ရင် အဲဒီအချိန်လေးမှာ အောက်ပိုင်းကို နဲနဲမြှင့်ထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အထဲဝင်ရမှာတွေ ထွက်မကျစေဘို့ပါ။
အခုဟာက သဘာဝနည်းတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကူရမှာတွေကိုတော့ စာနဲ့ရေးထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်တခု အကြံပြုပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံး စိတ်ထဲမှာလဲ ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ ဆုတောင်းသလို Concentration ထားပါ။ စိတ်ရဲ့တန်ခိုးဟာ ဆေးတန်ခိုးထက် အဆများစွာ သာလွန်ပါတယ်။ Autosuggestion ဆိုတဲ့ မသိစိတ်မှာကိုက လိုလိုလားလား၊ စူးစူး စိုက်စိုက်၊ ထပ်ခါတလည်း၊ အဆင့် တခုတိုင်း၊ တခုပြီးတခု၊ စဉ်တိုက်၊ ဆက်တိုက်၊ အလေးအနက် အမိန့်ပေးတဲ့ စိတ်ရဲ့စွမ်းအာကို အသုံးချကြည့်ပါ။ တကယ်ဘဲလို့ မြင်-သိနေပါ။ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေပါ။ သန္နိဋ္ဌာန် ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ အမိန့်ပေးနေပါ။
ကိုယ်စား တွေးပေးမယ်။ ဆိုပါတော့ -
• Sperm ကျားသုတ်ပိုးတွေဟာ အခု Vagina မွေးလမ်းထဲက၊ ဟို အတွင်းဆုံးနေရာက Cx သားအိမ်အဝမှာ ရောက်နေကြပြီး၊ သားအိမ်အဝ အထဲကို မြန်မြန် ဆန်ဆန် ဝင်ချင်နေကြပြီ၊
• သန်မာလှတဲ့ သုတ်ပိုးတွေက သန်းနဲ့ချီရှိတာ၊ အလုအယက်၊ အမြန်အဆန်၊ သားအိမ်အဝထဲကို ဝင်လာကြပြီ။
• သားအိမ်အဝကလဲ နွေးနွေးထွေးထွေး၊ လက်ကမ်းကြိုနေတယ်။ သားအိမ်အဝက ကျိချွဲချွဲအရည်လေးတွေကလဲ ကူညီနေကြရှာတယ်။ အဆင်ပြေလိုက်တာ။ အနွေးဓါတ်ကလဲ သူတို့ အကြိုက်ဘဲ။ လမ်းကလဲ ဖြောင့်လို့၊ တန်းလို့။
• Ovary မျိုးဥအိမ်က ထွက်လာတဲ့ ကျန်းမာလှတဲ့ Ovum မ-မျိုးဥကလဲ ဝင်လာနေကြတဲ့ ကျားပိုးတွေနဲ့ တွေ့ရ၊ ဆုံရ၊ ပေါင်းစပ် ချင်လှပြီ။ မျှော်နေတာ ကြာပြီလေ။
• မျိုးဥလေးက Tube သားအိမ်ပြွန်ကနေ အထဲဝင်လာနေပြီ။ ဘာအခက်အခဲမှလဲ မရှိဘူး။ အဆင်ပြေလိုက်တာ။
• အထဲကိုရောက်ပြီ၊ လိုက်ရှာနေပြီ။ အလုအယက် ဝင်လာနေကြတဲ့ အင်မတန် စွဲမက်စရာကောင်းလှတဲ့ ကျားသုတ်ပိုးတွေဆီကို မ-မျိုးဥက အကြော့သား ဆင်းလာနေပြီ၊
• ကျားသုတ်ပိုးကလဲ အကင်းပါးလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့၊ ဘယ်မှာရှိမယ်ဆိုတာ အတတ်သိ။
• ဟော သူတို့တတွေ ဖူးဇာဆုံ၊ ရေစက်ပါတာမို့ တွေ့ကြ၊ ပေါင်းကြပြီ။ အရင်ဘဝတွေမှာ အတူတူ ကုသိုလ် ပြုခဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတာကိုး။
• ပျော်စရာ၊ နှစ်သက်စရာ၊ စွဲမက်စရာ အင်မတန် ကောင်းလှပါလား။ တမျိုးနဲ့တမျိုး သံလိုက်ဓါတ် အဖိုနဲ့အမလို ကပ်သွား လိုက်ကြတာ။ ဘယ်လိုမှ ခွါထုတ်လို့ မရတော့ဘူး။ Bravo!
• သန်းနဲ့ချီတဲ့ ကျားသုတ်ကောင် သန်သန်မာမာတွေက သူ့ထက်ငါ အစွမ်းပြနေကြတယ်။ သူတို့ထဲက အကောင်းဆုံး၊ အတော်ဆုံး၊ အချောဆုံး၊ အလှဆုံး၊ ကံအကောင်းဆုံးတခုက အနိုင်သွားပြီး။ မမျိုးဥကနေ သူ့ကို စကာတင် ရွေးလိုက်ပြီဘဲ။ Congratulations!
• ဟော သူတို့က ပေါင်းသွားလိုက်ကြတာ နှစ်ကိုယ့်တစိတ်။ တခုထဲ လုံးလုံးဖြစ်သွားပြီ။
• Uterus သားအိမ်ထဲက အခြေ အနေတွေကလဲ အလွန်ကို အဆင်ပြေလိုက်တာ။ လိုလေသေးမရှိ အကုန် အဆင်ချောအောင် လုပ်ပေးနေတယ်။
• မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် ဆဲလ် တွေ ၁ ခုက ၂ ခု၊ ၂ ခုကနေ ၄ ခု၊ ၈ ခု၊ ၁၆ ခု ပွါးများလာလိုက်ကြတာ။ မြန်လဲမြန်၊ မှန်လဲမှန်။ အသက်ရှိတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပြောတာ။
• ငါ့ သွေး၊ သူ့သွေး စစ်လို့။ ငါ့မျိုးဆက်၊ သူမျိုးဆက် ပေါင်းဖက်ကြပြီ။ ဒို့မျိုးဆက် ဖြစ်လာနေပြီ။
• ငါ့ သားအိမ်ထဲက အကောင်းဆုံး နေရာလေးကို လိုက်ရှိနေပြီ။ တွေ့ပြီ၊ တွေ့ပြီ။ ဒီနေရောလေး။ မြုပ်ဝင်သွားပြီ။ ရေခံမြေခံ ကောင်းလှတယ်ဆိုတာ ဒါဘဲ။
• မျိုးလဲမှန်၊ မိုးလဲသန်။ သားအိမ်ကနေ လိုတာတွေ အကုန်အစင် လိုလေသေးမရှိ ဖြည့်ဆီးပေးနေတယ်။ ဆဲလ်လေးတွေ ဆက်ဆက် ပွါးများလာကြတယ်။
• ဟော ဒို့လိုချင်နေကြတဲ့ သန္ဓေသား၊ အမိစစ်-အဖစစ်ရဲ့ မျှော်နေရတဲ့ သန္ဓေသား၊
• ၅၂၈ အသစ်တခု လူ့လောကထဲမှာ လာနေပါပေါ့လား။ Welcome to the beautiful World!
ကျွန်တော့် ဖြေစာထဲမှာ "ဆန်ခါတင်" လို့ သတ်ပုံပြင် ဖတ်ပါခင်ဗျား။
သိချင်တာလေးရှိလို့ ထပ်မေးပါရစေ ဆရာ၊ သုတ်ရည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာ သုတ်ရည်က သားအိမ်ထဲကို မရောက်ဘဲ အမျိုးသမီး လမ်းကြောင်းက ပြန်ထွက်သွားတာကို ဆိုတာလားဆရာ။ အတူနေပြီးနောက် နာရီအတော်ကြာငြိမ်နေသော်လည်း မနက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီး လမ်းကြောင်း အရည်တချို့ပြန်ထွက်ပါတယ်၊ အဲလိုမျိုးကို သုတ်ရည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်လို့ ခေါ်တာလားဆရာ။
သမီးမေးတဲ့အထဲမှာ ရိုင်းသွားတာပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ။ ကုသလို့ရတဲ့ နည်းရှိရင်လည်း သိပါရစေ။
ယောက်ျားဆီးကြိတ် Prostate ရောဂါရှိရင်၊ ဆီးထွက်ပြွန်ကနေ ကရိယာထည့် ခွဲစိတ်ထားရင်၊ အော်တိုနောမစ် အာရုံကြောစနစ်ကို သွားထိခိုက်မိလို့ ဖြစ်တာပါ။ Testes (တက်စ်တိစ်) ကျားအစိ ကင်ဆာဖြစ်လို့ (လင့်ဖ်-နုတ်) တွေကို ခွဲထုတ်ရင်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲလိုမဖြစ်ရအောင် လေဆာသုံးခွဲစိတ်တာ လုပ်ပါတယ်။
ဆေးကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ Prostate လို့ ခေါ်တဲ့ ယောက်ျားဆီးကြိတ်က ကင်ဆာမဟုတ်ဘဲ၊ အသက်ကြီးချိန်မှာ ကြီးလာတဲ့ရောဂါ BPH ကိုကုတဲ့ Tamsulosion ဆေး။ နောက်ပြီး စိတ်ရောဂါကုတဲ့ ဆေးတချို့။ ဆီးချိုရောဂါရှိရင်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အဲဒီပြဿရှိနေသူကို ကလေးရချင်ရင် ယောက်ျားရဲ့ ဆီးကို Centrifuge လုပ်ပြီး သုတ်ရည်ကို ဇနီးရဲ့ မွေးလမ်းထဲ ထည့်ပေးတာ လုပ်နိုင်တယ်။
အထောက်အကူနည်း တခုကတော့ ဆက်ဆံလို့ ပြီးသွားချိန် Orgasm မှာ ယောက်ျား အပြင်လိင်အင်္ဂါ ရှိတဲ့နေရာတဝှိုက် Perineum မှာ နှိပ်နယ်ပေးတာ လုပ်တယ်။
ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ ဆရာလည်းဘဲ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
Myo Zaw Win said...
ဒါကျွှန်တော်ပထမဆုံးရေးတဲ့စာဖြစ်လို့ အမှားများပါခဲ့ပါကခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာ ။ ပွင့်လင်းလွန်းပီးရိုင်းသွားခဲ့ရင် အနူးအညျွှတ်တောင်းပန်ပါတယ် ဆရာ ။ ကျွှန်တော်က အသက် ၂၀ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ ။ ကျွှန်တော့်ကောင်မလေးက ကျွှန်တော့်ထက် ၄ နှစ်ကြီးပါတယ် ။ ကျွှန်တော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်လောက်က အတူနေခဲ့ကြပါတယ် ။ ကျွှန်တော့ကောင်မလေး အပျိုမို့ လို့ ဆက်ဆံရတာ ခက်ခဲပါတယ် ။ ကျွှန်တော်လည်းသူနာမှာဆိုးလို့ အဂ်ါထဲအထိ မထည့်ပဲ ဆီးစပ်နားမှာပဲ ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ် ။ ကျွှန်တော့် sperm တွေအ၀နားမှာပဲထွက်သွားပါတယ် ။ ပီးတော့ Tissue နဲ့ သုတ်ပစ်လိုက်ပီးတော့ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတော့ သူဆေးလိုက်တယ် ။ သူအခု ရာသီမလာတာလည်းကြာပီ ။ ခါတိုင်းဆို ရာသီပုံမှန်မလာရင် ဆေးထိုးပီးတော့ ရာသီလာအောင် လုပ်ပါတယ် ။ အခုအကြိမ်ဆေးထိုးထားတာတောင် ရာသီမလာသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ ။ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားမှာအရမ်းစိတ်ပူမိပါတယ် ဆရာ ။ အခုအချိန်တားဆေးသုံးရင်ကော မှီသေးလား ဆရာ ။ ကျွှန်တော့အနေနဲ့ လည်း
သူ့ ကိုလပ်ထပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်လို့ ပါ ။ ကျွှန်တ်ေတို့ ဆက်ဆံပီး တစ်ပတ် ၁၀ ရက်လောက်နေမှ တားဆေးသုံးလို့ ကော ရနိုင်သေးလား ဆရာ ။ ကျေးဇူးပြုပီး ဖြေကြားပေးပါ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။